पठनपाठन ठप्प पारी विद्यालयमा विवाह भोज
व्यवस्थापन समिति भन्छ - जग्गादातालाई छुट छ
अजय शाह | २०७६ जेठ २९ बुधबार | Wednesday, June 12, 2019 १०:५७:०० मा प्रकाशित
जनकपुर- महाेत्तरीको गौशाला नगरपालिका-२ स्थित श्री माध्यमिक विद्यालय निगौंल मंगलबारदेखि बन्द गराइएको छ।
समाजवादी पार्टी नेपालका नेता लक्ष्मी महतोका भतिजको विहेको भोजभतेरका कारण मंगलबार बन्द रहेको विद्यालय आज दोश्रो दिन पनि खुलाइएको छ।
विद्यालयमा मंगलबार दिनभर भोजभतेर चल्यो। विद्यालय हाताभित्रै परिकारहरु पकाउनेदेखि खुवाउने कामसमेत गरियो। जसका कारण पठनपाठन हुन सकेन। मंगलबार नै भाैजभतेर सकिए पनि आज पनि विद्यालय बन्द छ।
आखिर पठनपाठन नै ठप्प पारी २ दिनसम्म कसरी विद्यालय बन्द गराइयो त?
विद्यालयमा विवाहको भोज गर्न विद्यालय व्यवस्थापन समितिले नै निर्णय गरेर स्वीकृति दिएको बताइएको छ। उता विद्यार्थीलाई भने बिदाको जनाउ दिइएको थियो। पठनपाठन रोकेर आयोजना गरिएको भोजमा स्थानीय जनप्रतिनिधि र नेताहरू समेत सामेल भएका थिए। सुशासन कायम गर्ने निकायकै व्यक्ति तथा नेताहरुले दिद्यार्थी बसेर पढ्ने डेक्सबेन्चमै भोज खाएको दृश्य उदेक र रमितालाग्दो देखिन्थ्यो।
यसबारे कारण सोध्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष शत्रुधन रामले ठूला व्यक्तिको बिहेमा जन्ती राख्न र विवाह भोज खुवाउन पहिलेदखि नै स्कुल बन्द गराउँदै आएको गैह्रजिम्मेवार जवाफ दिए। ‘व्यवस्थान समितिले नै विद्यालयका जग्गादातालाई आवश्यक परेमा विवाह र व्रतबन्ध गर्न एक दिन स्कुल बन्द गर्न पाइन्छ भन्ने निर्णय गरेको छ। त्यहीअनुरूप मंगलबार विद्यालय बन्द गरेर विवाह भोज भयो,’ उनले भने।
लक्ष्मी महतो, नरेश सिंह, कपलेश्वर सिंह, शलाम शेकले विद्यालयलाई जग्गा दिएको उनले बताए। विद्यालयका कक्षाकोठा र चौरमा मंगलबार साँझसम्म भोज खानेको आउजाउ चलिरह्यो। आज कक्षाकोठा र डेक्सबेन्चमा भोजको जुठो तथा फोहोरले गर्दा आज पनि विद्यालयको पठनपाठन ठप्प छ। अहिले पनि विद्यालयको हाताभित्र प्लास्टिकका गिलासहरु तथा भातका सिताहरु चारैतिर फ्याँकिएको देखिन्छ।
विद्यालयमा नेता लक्ष्मी महतोले भतिज सचिनको विवाहको प्रीतिभोज गरेका हुन्। भोजमा नेता, कार्यकर्ता, गाउँले, प्रहरी, प्रशासन सबै आमन्त्रित थिए। भान्से भरत साहले मंगलबार बिहानैदेखि स्कुलमा भोज पकाउन सुरु गरेको बताए।
यस सम्बन्धमा गौशाला नगरपालिकाकी उपमेयर आशा लामाको पनि गैह्रजिम्मेवार जवाफ सुनियो। ‘स्कुलमा विवाह भोज गर्नु ठिक होइन। बिहानको पढाइ भएर दिउँसो भोज गरेको सोचेको थिएँ,’ विवाह भोजका नाममा विद्यालय बन्द गराएर बालबालिकालाई पढ्नबाट वञ्चित गर्न पाइन्छ? भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘त्यो प्रश्न नेता लक्ष्मी महतोलाई नै सोध्नुस्।’
गाउँमा सार्वजनिक ठाउँ अभाव भएकाले विद्यालयमा भोज आयोजना गर्नुपरेको नेता महतोले बताए। ‘गाउँमा भोज गर्ने कुनै ठाउँ छैन। बाध्यताबस स्कुलमा भोज गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने।
विद्यालयको पठनपाठन बन्द गराई भोज भतेर गर्नु सरासर गलत भएको मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल महोत्तरीका सचिव रञ्जन भण्डारीले बताए। उनले यस्ता गतिविधि गर्ने र गराउनेलाई उचित कारबाही गर्न सम्बन्धीत निकायले कदम चाल्नु पर्ने आवश्यक्ता रहेको जिकिर गरे।